Ma jiraan wax qalab barnaamijka Amazon muhiim ah oo loogu talagalay dadka bilowga ah?
Waxaa horeyba loo yaqaanaa in la xakameynayo cilmi-baaris habboon ee muhiimka ah ay ka mid tahay qaybaha ugu muhiimsan ee Mashiinka Raadinta (SEO) iyo fekerka casriga ah ee Suuq-galka Dijital ah iyo dhammaan ganacsiga Eekmerby, oo run ahaantii iska indha tiraya meesha aad ka iibineyso illaa hadda. Qaar ka mid ah khabiirada SEOs ayaa leh "content waa boqorka. "Taas macnaheedu ma aha oo kaliya raadinta raadinta asalka ah ee mashiinnada waawayn sida Google laftiisa, laakiin ganacsiyada ganacsiga ee maraakiibta iyo ficil ahaanba mashruuc kasta oo online ah oo ka shaqeeya iibinta dukaamada online, sida Amazon. Oo aynu wajahno - waa inay ka baxaan su'aasha ah in gaar ahaan iibiyeyaasha bilawga ah ee Amazon u baahan yihiin software ugu muhiimsan oo dhan.
oo kaliya ma aha in ay ka baxaan kuwa ka soo horjeeda oo waxay bilaabaan inay dhisaan sumcadooda iyo awoodooda ganacsi guuleysta. Wax walbaa waa in qofna laga yaabo inuu ka badbaado heerka dhabta ah ee tartanka suuqa, haddii aan lagu taageerin habka muhiimka ah ee Amazon keyword, caawiyaha raadraaca iyo qalabyada qiimaha si loo ilaaliyo alaabada la soo bandhigay. Ugu dambeyntii - inaad ku guuleysato sanduuqa iibsashada oo aad ka mid tahay waxyaabaha ugu sarreeya ee lagu soo bandhigay iibinta halkaas. Sidaa darteed, adoo tixgelinaya in cilmi-baarista muhiimka ah laftiisa, iyo sidoo kale qiimaha qiimaha leh ee mudda dheer ee qiimaha leh, dhab ahaantii ay tahay baahi aad u xun halkii ay ka heli lahayd nooc kasta oo raaxo ah, halkan waa qaar ka mid ah. habab aan caadi aheyn oo loo dooranayo si sahlan oo runtii ah waxqabadka qalabka software-ka Amazon ee loogu talagalay dadka bilowga ah. Rajeynta waxaad heli doontaa kickstart wanaagsan oo leh iyaga, Dabcan adigoon kharash gareeynin, sida mid kasta oo ka mid ah qalabyada keydka Amazon keywords ayaa laga heli karaa marinka furan ee Webka, ama ugu yaraan qaybtooda aasaasiga ah. Qorshaha Ereyada Google AdWords
Waxaa laga yaabaa inuu u muuqdo mid aan maskaxda lahayn, laakiin qalabkan aasaasiga ah ee loo isticmaalo qaybta libaax ee barnaamijyada da'da yaryar ee dugsiga ayaa sidoo kale u adeegi kara xitaa soo iibsiyada Amazon sida ereyga muhiimka ah software kaas oo run ahaantii shaqeeya. Waxyaabahaasi waa in xalkan asaasiga ah uu aad u fiican yahay kuwa bilowga ah. Sababtoo ah sababtoo ah qalabkan raadinta ee caalamiga ah waa mid aad u wanaagsan oo ku siinaya sawir weyn oo muujinaya dhammaan shuruudaha raadinta ee aad ku guuleysan karto iyo isku-dhafka dheeraadka ah, heerkooda hadda ee tartanka (haddii kale, sida ay u adag tahay ereyadan muhiimka ah) , iyo sidoo kale celceliska raadinta celceliska qormooyinka muhiimka ah ee muhiimka ah. Looma baahna in la sheego in xogta Google ay tahay in ay noqoto midka ugu weyn uguna muhimsan, in lala wadaago oo keliya hal suuqa (sida Amazon, eBay, Walmart, iwm.), laakiin waxaa laga soo ururiyey dhammaan raadinta bini-aadanka oo laga heli karo internetka.
Halkan waa liis kooban oo ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee ay bixiso Qorshaha Ku-Meel-Gaarka ee Google marka loo adeegsado kartida barnaamijka cilmi-baarista ee Amazon keywords:
helitaanka liiska alaabtaada waxaad ku dareysaa liisto cusub ama raadin dheerad ah. Keliya waxaad gashaa meel qaraabo ah, erey kasta oo macneheedu yahay, qaybta wax soo saarka, bogga, ama wax soo saaraha - oo la sameeyo.
Sawir weyn u yeelo mugga raadinta wixii ereyo muhiim ah oo wax soo saarka wax soo saarka ah ama laga yaabo in ay ku guuleystaan ​​raadinta isku-dhafan ee ay isticmaalaan dadka isticmaala noloshada aduunka oo dhan.
Ku dhaji liisaska liiska ugu muhiimsan ee muhiimka ah ee muhiimka ah iyo ereyada horay loo qorsheeyay ee lagu bartilmaameedsaday iyada oo la helayo fikrado aad u qiimo badan iyo soo jeedino dheer-sheeg ah oo muhiim ah isla markiiba. Ha ilaawin in Qorshaha Keydka Kelmadaha ee Google uu yahay fursad dahabi ah oo si dhakhso ah u aqoonsan karta ereyada muhiimka ah ee ugu muhiimsan gobolka ee lagu bartilmaameedsaday (i. e. , magaalada, gobolka, iyo waddanka). Qalabka Cilmi baarista
Si ka duwan calaamadaha kale ee caanka ah ee Amazon keyware, qalabkaan oo dhan ayaa loogu talagalay inay ku siiyaan fahan macquul ah oo muhiim ah - si toos ah uga soo horjeeda kuwa kaa soo horjeeda , ama laga soo ururiyay kuwa ugu guulaystay ee iibiya meelo kale oo Webka ah. Lahaanshada aasaasiga ah oo lacag la'aan ah oo lacag la'aan ah, Keyword Spy waa xalka dhabta ah ee loogu talagalay iibiyeyaasha bilowga ah si deg deg ah u qiyaasaan mugga raadinta ee erey kasta oo muhiim ah, oo ku xiran inaad ku siiso baakad aad u ballaaran oo la isku darayo raadinta iyo soo jeedinta dhammaan dhererka dheer isku-dhafan (oo ay suurtagal tahay doorasho muhiim ah oo LSI ah) ayaa lagula talinayaa in lagu daro.
SEMRush qalabka muhiimka ah
Naqshaddan asalka ah ee SEO waxa ay leedahay qalab adeeg oo gaar ah, oo si sahlan u noqon karta xal kale oo aad u fiican marka ay timaaddo doorashada midig Amazon keyword keyword. Waxaa ka mid ah qaybaha ugu xoogan, sifooyinka soo socda ee cilmi-baaris ballaaran oo muhiim ah ayaa u muuqday kuwo si fiican u shaqeynaya: rikoorka qiyaasta qiyaasta ereyada muhiimka ah, qiimeynta qiyaasta bisha qiimaynta, maareynta xayeysiinta PPC, cilmi-baaris tartan iyo falanqaynta tiknoolajiyada dabiiciga ah ee ka soo horjeeda suuqa.
Qalabka Keliya Keydinta
Cinwaankan is-sharaxay waa magaca barnaamijka ugu muhiimsan software Amazon keywords. Haa, Qalabka Keyword maahan hal kaaliye oo kelmado ah, laakiin qaybta internetka oo dhan oo bixisa nuqul bilaash ah oo bilaash ah oo loogu talagalay iibsadaha aqristay ee Amazon si aad u heshid ereyada ficil-celinta ee ugu sareysa iyo jumlada raadinta dheer ee liiska alaabadooda. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, in la soo saaro qaar ka mid ah muuqaalada horumarsan oo khibrad leh oo ka mid ah barxadkan, ganacsato badan oo waqti-badan oo khibrad leh oo iibiya on Amazon waxay u baahan doontaa inay bixiso nuqulkii hore ee loo yaqaan "Keyword Tool Pro.
KwFinder Qalabka Cilmi baarista
KwFinder waa qalabka ugu dambeeya ee software Amazon keyword Waxaan jeclaan lahaa inaan ku tuso maanta. Doorashadani waxay ku haboontahay inaad ku haboonaato marka ay timaaddo kobcinta qadiyadaha muhiimka ah ee ereyada muhiimka ah ee dheeraadka ah iyo erayada raadinta badeecada ee ka dhex muuqda dukaamada iibiya nolosha illaa hadda. KwFinder ayaa si siman waxtar u leh ma ahan oo kaliya Amazon lafteeda, laakiin inteeda kale boggaga kale ee caanka ah ee e-macaamiisha (sida eBay, Walmart, dukaanka Alibaba, iwm.), iyo sidoo kale kuwa kale, xitaa meelo aan iibin, sida adeegga YouTube video, adeegga labaad ee booqashada adduunka ee labaad. Ka dib, waxaan helay KwFinder xitaa waxtar badan, gaar ahaan tiro badan oo ah qaabab waxtar leh sida habka fudud ee nuqul-xulashada si dhakhso ah u dhaqdhaqaaqa liisaska, iyada oo la adeegsanayo talooyin kale oo aan si weyn loo isticmaalin oo muujinaya xisbiyada cirridka, su'aalaha loogu talagalay walxaha muhiimka ah ee loo baahan yahay, iyo sidoo kale darajada rikoodhka u leh Source .